ओभुलेशन १०१: चक्र, क्यालकुलेटर, र अवधारणा - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर समुदाय कम्पनी, औषधि जानकारी चेकआउट कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> ओभुलेशन १०१: चक्र, क्यालकुलेटर, र कन्सेप्शनको बारेमा बढि जान्नुहोस्
ओभुलेशन १०१: चक्र, क्यालकुलेटर, र कन्सेप्शनको बारेमा बढि जान्नुहोस्
ओभुलेशन एक महिलाको मासिक धर्म चक्रको हिस्सा हो जब अंडाशयले अण्डा छोड्दछ। ओभुलेशन भनेको के हो भनेर थाहा पाएर ovulation को समय, र यसलाई कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने कुराको शरीरको साथ तालमेलमा रहन उत्तम तरिका हो। जब उनीहरू अण्डुलनरत हुन्छन् भनेर जान्न महिलाहरूलाई मद्दत गर्दछ गर्भवती हुनबाट जोगिनुहोस् वा तिनीहरूलाई गर्भधारण गर्न सहयोग गर्नुहोस्। परिवार नियोजनको बारे ovulation र FAQ हरूको आधारभूत तथ्यहरू हेरौं।
ओभुलेशन चक्र: ओभुलेशन कहिले हुन्छ?
ओभुलेशन महिलामा महिनामा एक पटक हुन्छ। यहाँ औसत मासिक धर्म चक्रको समयरेखा छ:
मासिक धर्म (दिन १-7): गर्भाशय अस्तर को बहाउने
फोलिकुलर चरण (दिन १-१ days): फोलिकल्स परिपक्व अण्डामा विकसित हुन्छन्
ओभुलेशन (१ 14-१-15 दिन): एउटा परिपक्व अण्डा छोडिन्छ र गर्भाशयको लागि निषेचनको लागि यात्रा गर्दछ
लुटेल चरण (१ 16-२8 दिन): अण्डा या त निषेचित गरिएको छ र शरिरले प्रारम्भिक गर्भावस्थालाई समर्थन गर्न प्रोजेस्टेरोन उत्पादन गर्दछ, वा अन्डा निषेचित हुँदैन र गर्भाशयको अस्तर बिच्छेद हुन्छ।
मासिक धर्म र follicular चरण
औसत मासिक धर्म चक्र २--दिन चक्रमा चल्छ, पहिलो दिनको चिह्नको पहिलो दिन, र अर्को अवधिको पहिलो दिन २king लाई मार्कि.। महिलाको चक्रको पहिलो आधा भाग फोलिकुलर चरण भनिन्छ। यस चरणको अवधिमा, इस्ट्रोजेनको स्तर बढ्छ, र पिट्यूटरी ग्रंथिले फोलिकल-उत्तेजक हार्मोन (एफएसएच) रिलीज गर्दछ, जसले केही फोलिकाहरूलाई परिपक्व अण्डाहरूमा विकास गर्न अनुमति दिन्छ। यद्पि ओभुलेसनको अवधिमा केवल एउटा अण्डा छोडिन्छ।
ओभुलेशन मासिक चक्रको पहिलो दिनको लगभग दुई हप्ता पछि हुन्छ। त्यसैले यदि अवधि एक मासिक चक्र को एक दिन चिह्नित, यसको मतलब ovulation मिति मासिक चक्र को आधा बाटो, 14 दिन को आसपास हुनेछ।
ओभुलेसनको समयमा अण्डाले एउटा फलोपियन ट्यूब र गर्भाशयमा यात्रा गर्दछ, जहाँ यसले उर्वर निषेचन गर्न सक्छ। एउटी चक्रमा एउटी महिलाले एक पटक मात्र अण्डाकार लिन सक्दछ, तर प्रत्येक अंडाशयबाट एउटा अण्डा निकाल्न सम्भव छ। यदि यो हुन्छ र महिला गर्भवती हुन्छ, तिनीहरूसँग गैर-समान जुम्ल्याहा हुनेछन्। (समान जुम्ल्याहा एउटा उर्वर अण्डाबाट विभाजनबाट आउँछ जसको समान प्रतिलिपिमा विभाजन हुन्छ।)
यो ovulatory अवधि गर्भवती हुनको लागि सबै भन्दा राम्रो समय हो। जहाँसम्म ओभुलेशनको समय छोटो छ, करीव १२ देखि २ hours घण्टा सम्म, महिलाले गर्भवती हुन सक्छन् यदि उनीहरूले ओभुलेसन हुनुभन्दा एकदेखि पाँच दिन अघि सम्भोग गरे। शुक्राणु धेरै दिनसम्म महिला प्रजनन पथमा जीवित रहन सक्छ। यदि उसले ओभुलेशन अघि वा यस समयमा असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेको छैन भने, एक महिला अर्को पटक अंडाकार गर्नाले गर्भवती हुन सक्दिन।
सम्बन्धित: हप्ताको सबैभन्दा रोमान्टिक समय
लुटेल चरण डिम्बग्रंहाणको पछि लाग्छ, करीव १ for दिनसम्म रहन्छ, र महिलाको मासिक चक्रको पहिलो दिनमा समाप्त हुन्छ। यदि अण्डालाई निषेचित गरियो भने, शरीरले प्रोजेस्टेरोन उत्पादन गर्न जारी राख्दछ र गर्भाशयको अस्तरले गर्भावस्थालाई प्रारम्भिक रूपमा समर्थन गर्दछ। यदि अण्डा फलाउँदैन भने यो गर्भाशयबाट मासिक चक्रको २ 28 दिनमा गर्भाशयको अस्तर शेड हुने बित्तिक मासिक सुरू हुन्छ। औसत महिलाको अवधि तीन देखि सात दिनसम्म रहन्छ।
Ovulation क्यालकुलेटरहरू: कसरी ovulation ट्र्याक गर्न
भर्खरको टेक्नोलोजीले ट्र्याकि o ovulation यति सजिलो बनाएको छ। त्यहाँ महिलाहरु र जोडीहरु को लागी धेरै विकल्पहरु छन् जो गर्भवती हुन चाहान्छन् वा ovulation ट्र्याक गरेर गर्भवती हुनबाट जोगिनुहुन्छ।
के तपाइँ एन्टिबायोटिक मा एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्न सक्नुहुन्छ
यहाँ ovulation ट्र्याक गर्न केहि तरिकाहरू छन्:
मासिक धर्म चक्र ट्र्याकिंग अनुप्रयोग
बेसल शरीर को तापमान मापन
गर्भाशय ग्रीवा म्यूकस उत्पादन ट्र्याकिंग
ओभुलेशन कहिले हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने उत्तम तरिका भनेको विशेष गरी एउटी महिलाले गर्भधारण गर्ने कोसिस गर्नु भनेको ओभुलेशन प्रेडिक्टर किट्स प्रयोग गर्नु हो जुन मूत्र परीक्षण हो जसले ल्युटेनाइजिंग हार्मोन (एलएच) पत्ता लगाउँछ - ओभुलेशन सुरू गर्ने हर्मोनले भन्छ एरिक फ्लीसर , MD, मा एक बोर्ड प्रमाणित प्रसूतिशास्र-स्त्री रोग विशेषज्ञ न्यूयोर्कको प्रजनन चिकित्सा सहयोगी । सामान्यतया, जब एक सकारात्मक परीक्षण पत्ता लाग्छ, ovulation २ to देखि hours 48 घण्टामा देखा पर्दछ।
Ovulation र विभिन्न ट्र्याकिcking विधिहरू कसरी ट्र्याक गर्ने बारेमा थप जान्नको लागि तपाईंको OB-GYN सँग कुरा गर्नुहोस्।
के ओभुलेशन एक मात्र पटक गर्भवती हुन सक्छ?
गर्भधारणको लागि उत्तम दिन ओभुलेशनको दिन वा पछिको दिन हो - सामान्यतया औसत मासिक चक्रको १ 14 र १ days दिन। यद्यपि महिलाहरू अझै पनि आफ्नो उर्वर विन्डोमा गर्भवती हुन सक्छन् जुन ओभुलेशनको दिन हो र पाँच दिन अगाडि (१०-१-15 दिन)। शुक्राणु धेरै दिनसम्म प्रजनन पथमा बस्न सक्छ। महिलाहरू अर्को चक्र सम्म ovulation पछि गर्भवती हुन सक्ने छैनन्।
तपाईलाई कसरी थाहा छ यदि तपाई ओभुलेटर हुनुहुन्छ भने?
ओभुलेसन दुखाई प्रायः धेरै महिलाहरूको लागि पहिलो संकेत हो जुन उनीहरू ovulating गर्दैछन्। यहाँ ovulation का केहि लक्षणहरु छन्।
तल्लो पेटको दुखाई मात्रै एक साइडमा हुन्छ
सेक्स ड्राइव बढाइयो
हल्का रूपमा बेसल शरीर तापमान वृद्धि भयो
तल्लो पीठ दुख्ने
गन्धको एक उच्च भावना
यदि यी लक्षणहरू मध्ये कुनै पनि अवस्थित छ भने, महिलाहरूले अझै पनि थाहा पाउन सक्दछन् कि तिनीहरू एक ovulation क्यालेन्डर, एक ovulation पूर्वानुमान किट, वा अन्य तरिकामा मासिक चक्र ट्र्याक द्वारा ovulation गर्दै छन्।
ओभुलेसन पेन कहिलेकाँही भनिन्छ मध्य दुखाई , जुन जर्मन शब्द मध्य र दुखाइबाट आएको हो किनकि यो मासिक चक्रको मध्यमा रहेको छ। पीडादायी ovulation एक संकेत हुन सक्छ कि शरीर गर्भवती हुन तयार छ। जहाँसम्म, ओवुलेशन दुखाइ हुनु भनेको महिलाको बाँझीपनको मतलब हुँदैन। धेरै महिलाहरू ओभुलेट हुँदा एसिम्प्टोमेटिक हुन्छन्।
पीडादायी ओवुलेसन धेरै महिलाहरूको लागि हुन्छ, तर दुखाइ अनुभव गर्नुको मतलब केहि गलत छैन भन्ने होइन। ओभुलेशन दुखाई सामान्य हो र शरीरको कार्य कसरी गर्ने भनेर हुन्छ। अण्डाशयबाट अण्डा निकाल्नु अघि, यो बढ्छ र अंडाशय ठूलो हुन्छ, जसको पेटको एकपट्टि दुखाइ हुन सक्छ। जारी अण्डा follicular तरल पदार्थ र रगत को एक बिट संग यात्रा, जो पेट उत्तेजित र पीडा हुन सक्छ।
यहाँ केहि अरू लक्षणहरू छन् जुन महिलाले ओभुलेट गर्ने बेलामा हुने हुन सक्दछ:
सुस्त वा तेज तल्लो-पेट दुख्ने
Ovulation को कम गर्न को लागी केहि उपचारहरु यहाँ छन्:
तताउने प्याड प्रयोग गर्नुहोस्
आईबुप्रोफेन जस्ता ओभर-द-काउन्टर दुखाइ प्रयोग गर्नुहोस्
पेटमा दुखाइ, स्पटिंग, वा अन्य लक्षणहरू केहि दिन पछि टाढा नजान्नेलाई केहि चिकित्सा उपचार आवश्यक पर्न सक्छ। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अन्तर्निहित स्वास्थ्य स्थितिको लागि हेर्न सक्छन् कि यी लक्षणहरू रहिरहने वा झन् खराब गर्न सक्ने कारण हुन सक्छ।
सबैले ovulation को अलि फरक अनुभव गर्नेछन्, तर अनियमित ovulation ले प्रजनन समस्या र गर्भवती हुन असमर्थ हुन सक्छ। यहाँ केहि अन्तर्निहित सर्तहरू छन् जुन महिलाको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ:
strattera ले तपाइँलाई कस्तो महसुस गराउँछ
क्षतिग्रस्त वा अवरुद्ध फलोपियन ट्यूबहरू
पालीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिन्ड्रोम जस्तो ओवुलेशन डिसआर्डरहरू ( PCOS ) वा हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन
पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा हर्मोन प्रोलैक्टिनको अत्यधिक उत्पादन
ओभुलेशनलाई कसरी प्रेरित गर्ने
OB-GYN उत्तम व्यक्ति हो जब चिकित्सा अनलाईन वा प्रजनन समस्याहरूको समस्या आउँदछ तब के गर्ने भन्ने बारे सल्लाह लिनु पर्छ। ऊ वा उनीले कुनै पनि अन्तर्निहित कारणहरू निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ र उपचार योजनाको सिफारिस गर्न सक्छ जुन निम्न मध्ये एक वा बढी समावेश गर्दछ:
भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVF) मा
फेलोपियन ट्यूब सर्जरी
जीवनशैली परिवर्तन जस्तै व्यायाम र स्वस्थ खानु
प्रजनन औषधिको साथ ovulation उत्तेजित
यहाँ केहि सामान्यत: निर्धारित प्रजनन औषधिहरू छन् जुन तपाईंको OB-GYN ले ओवुलेशन प्रेरित गर्न सिफारिश गर्न सक्छ:
सामान्य प्रजनन औषधि
सेरोफेन (क्लोमिफेन साइट्रेट) फेमारा (लेट्रोजोल) मेनोपुर (मेनोट्रोपिन) ग्लुकोफेज (मेटफर्मिन एचसीएल)
यो कसरी काम गर्दछ FSH र LH को हर्मोन उत्पादन बढाउँछ एफएसएचको हर्मोन उत्पादन बढाउँदै ओभुलेशन उत्पन्न गर्दछ IVF भन्दा पहिले ovulation उत्तेजित गर्न FSH र LH को इंजेक्शन इन्सुलिन प्रतिरोध सुधार गर्दछ, जसले ओभुलेशनलाई प्रेरित गर्न सक्छ
साइड इफेक्ट पेट अस्वस्थ, टाउको दुख्ने, स्तन कोमलता तातो चमक, कपाल झर्ने, मांसपेशी दुख्ने, कमजोरी इंजेक्शन साइट जलन, सूजन, टाउको दुखाइ बान्ता, पखाला, मुखमा धातुको स्वाद
मानक खुराक १, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट days दिनको लागि एक पटक मासिक चक्रको5दिनमा शुरू हुन्छ १, २. mg मिलीग्राम ट्याब्लेट एक दिनको एक पटक, days दिन (मासिक चक्र को 3-7 दिनमा) हरेक दिन एकै समयमा एक डाक्टर द्वारा निर्देशित को रूप मा छाला अन्तर्गत इंजेक्शन 75 इकाईहरु १, १,००० मिलीग्राम ट्याब्लेट खानाको साथ दिनमा २-। चोटि
लागत With 30– $ 40 को साथ एक एकलकेयर कूपन With १–– $ a० को साथ ए एकलकेयर कूपन With 400– $ 420 को साथ एक एकलकेयर कूपन With 4– $ 20 एक साथ एकलकेयर कूपन
कसरी एक पुरुष एक खमीर संक्रमण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ अरु कसै बाट निमोनिया पाउन सक्नुहुन्छ?
zantac र omeprazole बीच के फरक छ?